ကြောင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်သော ရောဂါများ | Moe Naymin
Campylobacter ရောဂါပိုးကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါဖြစ်ပြီး အူလမ်းကြောင်းတွင် အဖြစ်များသည်။ ဒီပိုးကို တိရစ္ဆာန်များ၏ မစင်တွင် အတွေ့များပြီး မသန့်ရှင်းသော အစားအစာအချို့တွင်လည်း တွေ့ရပါသည်။ အတွေ့များသော ရောဂါလက္ခဏာများမှာ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ မကြာခဏအန်ခြင်သလိုဖြစ်ခြင်း၊ ၀မ်းလျှောခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ကြောင်ကုတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါ (Cat scratch disease)
Bartonella henselae ကြောင့် ဖြစ်ပြီး အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကြောင်ကလေးလေးများထံမှ ကုတ်ခြစ်ခံရခြင်းကြောင့် အလွယ်တကူ အဖြစ်များပါသည်။ ကြောင်များတွင် fleas ဟုခေါ်သော မွှားကောင်များမှ တဆင့် တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင် ကူးစက်ပြီး ၄င်းသည် ကြောင်များအတွက် ဘေးဥပဒ်ရောဂါ မဖြစ်စေပါ။ ရောဂါ လက္ခဏာများမှာ အစာမစားချင်ခြင်း၊ မောပန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ သွေးပြန်ရည်ကြောများ ရောင်ယမ်းခြင်း စသည်များ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Cryptosporidium parvum ဟုခေါ်သော အလွန်သေးငယ်သည့် ကပ်ပါးကောင်များကြောင့် ဖြစ်သောရောဂါဖြစ်ပြီး လူနှင့်တခြားတိရစ္ဆာန်များကို ၄င်းတို့ဥသော ဥမှတဆင့် ကူးစက်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုအကောင်ဥများသည် စိုထိုင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နှစ်လမှ ခြောက်လအထိ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပြီး ရေကန်၊ စမ်းချောင်း စသည်များတွင် အမြောက်အများ တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုပိုးများသည် များသောအားဖြင့် ပါးစပ်မှတဆင့် ကူးစက်ပါသည်။ မသန့်ရှင်းသော အစားအစာများ၊ ရေများသောက်သုံးခြင်း၊ ပိုးမိနေသော တိရစ္ဆာန်များမှတဆင့်လည်း ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း စသည်များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ခဏခဏဖြစ်လျှင် လူခန္ဓာကိုယ်၏ ခုခံအားစနစ်လျော့နည်းပြီး အလွယ်တကူ ရောဂါဖြစ်လွယ်ပါသည်။
၄။ Dipylidium Infection
၄င်းသည်လည်း Dipylidium ဟုခေါ်သော ကပ်ပါးကောင်ကြောင့် ဖြစ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာများသည် အထက်ပါ Cryptosporidiosis ကြောင့်ဖြစ်သော လက္ခဏာများနှင့်ဆင်တူသည်။
ပလိပ်ရောဂါသည် Yersinia pestis ဟုခေါ်သော ပိုးမွှားမှတဆင့် အလွယ်တကူ ကူးစက်ပါသည်။ ထိုသို့ရောဂါပိုး ကူးစက်လျှင် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အရည် gland များ ရောင်ယမ်းလာပြီး နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ပြည်တည်ခြင်း စသည်များ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ၄င်း ရောဂါသည် ခွေး၊ကြောင်နှင့် ကြွက်မှတဆင့်လည်း ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ ပလိပ်ရောဂါကို ယခုအခါတွင် ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးများဖြင့် ကုသနိုင်ပါသည်။
၆။ ခွေးရူးပြန်ရောဂါ (Rabies)
မြန်မာလိုသာ ခွေးရူးပြန်ရောဂါဟုခေါ်သော်လည်း ကြောင်များတွင်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို ၄င်းတို့မှတဆင့် လူကို ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများတွင် စိုးရိမ်စိတ်အလွန်များခြင်း၊ စိတ်ရှုတ်ထွေးခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ အလွန်အမင်း ကဏာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ ရေသောက်ရန်ပင်ခက်ခဲခြင်း၊ လည်ပင်းအလွန်အမင်း နာကျင်ခြင်း၊ တံတွေးအလွန်အမင်းထွက်ခြင်း၊ စိတ်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တစ်ခြမ်းအကြောသေခြင်း စသည်တို့ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
၇။ ပွေးရောဂါ (Ringworm )
မှိုရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး လူ၏အရေပြားများတွင် ယားယံခြင်း၊ အနီရောင် အ၀ိုင်းကွက်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း စသည်များ ဖြစ်စေပါသည်။ ၄င်းသည် လူ့အရေပြားနှင့် တိရစ္ဆာန်တို့၏ အမွေးအမျှင် ထိတွေ့ရုံဖြင့် တိုက်ရိုက်ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ ထိုမှိုများသည် ကော်ဇော၊ အိပ်ယာခင်း ၊ အိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများတွင် ကြာရှည်စွာ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ ထိုရောဂါသည် ဆံပင်ဖြီးသော ဘီးမှတဆင့်လည်း ကူးစက်နိုင်ပါသည်။
၈။ Salmonella ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါ (Salmonellosis)
Salmonella ပိုးများ အူထဲတွင် ၀င်ရောက်ကူးစက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများသည် အော့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်အောက်ခြင်း၊ ၀မ်းလျှောခြင်း၊ ချမ်းတုန်ဖျားခြင်း၊ ၀မ်းထဲတွင် သွေးပါခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း စသည်များ အဖြစ်များပါသည်။
၉။ မှိုကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါတစ်မျိုး သို့မဟုတ် Sporotrichosis
Ringworm ကဲ့သို့ပင် အမျိုးအစားမတူသော မှိုရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာများသည် အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့် ဆင်တူပါသည်။ သို့သော် ထိုမှိုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင် အဖုများ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပြီး ပန်းရောင်နှင့် ခရမ်းရောင် အဖုများ ဖြစ်တတ်သည်။ ၄င်းတို့သည် တစ်ခါတစ်ရံ မနာကျင်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ နာကျင်သည်။ ထိုအဖုများကို မကုပဲ ကြာကြာထားလျှင် ပြည်တည်နာအထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။
၁၀။ ငှက်နှင့်နို့တိုက်တိရစ္ဆာန်များတွင် အဖြစ်များသော ရောဂါ (Toxoplasmosis)
Toxoplasma gondi ဟုခေါ်သော ကပ်ပါးကောင်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ဤကဲ့သို့ဖြစ်လျှင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးကွေးခြင်း၊ သန္ဓေသားစောမွေးခြင်း၊ အသေမွေးခြင်း ၊ ဦးနှောက်ထဲရေအိပ်တည်ခြင်း၊ အတတ်ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းအာရုံကြောဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုများ၊ မျက်စိရောဂါများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
Campylobacteriosis is an infection of the intestines caused byabacterium called Campylobacter. The bacteria is commonly found in the feces of infected animals and in food products contaminated with the bacteria during processing or preparation. Raw or undercooked chicken is one of the most common sources of human infection. Signs and symptoms include Cramping abdominal pain,Fever,Nausea and vomiting,Watery diarrhea, sometimes bloody.
Cat scratch disease isabacterial disease caused by Bartonella henselae. Young cats and kittens are most likely to be the source of human infection. The infection, which does not cause disease in cats, is transmitted between cats by fleas. Infected flea droppings on the cat's fur are the source of human infections, which are spread from the cat toaperson byacat bite, scratch or lick. Symptoms of cat scratch disease include swollen lymph nodes, fever, headache, fatigue, and loss of appetite.
Dipylidium Infection (Dog and Cat Flea Tapeworm)
Dipylidium is tapeworm of cats and dogs. People become infected when they accidentally swallowaflea infected with tapeworm larvae; most reported cases involve children. Dipylidium infection is easily treated in humans and animals. Signs and Symptoms include abdominal pain,colic (cramping and excessive crying in infants),intestinal cramps,nausea,fever,blood in your stool,appetite loss,
Plague isaserious infection of humans caused byagerm called Yersinia pestis. It is usually caused by the bite ofaflea that has fed on an infected wild animal, such asarat, chipmunk or prairie dog. It usually causes large sores and abscesses in the glands of the arms and legs. Dogs, and especially cats, can also become infected and can spread the disease to their human companions. Plague is treatable with antibiotics.
While nearly all human rabies in the U.S. is associated with bat strain rabies, rabies in domestic animals remainsaconcern. Signs and symptoms include Anxiety,Confusion, Fever,Hyperactivity ,Difficulty swallowing ,Excessive salivation, Fear of water (hydrophobia) because of the difficulty in swallowing, Hallucinations, Insomnia and Partial paralysis
Ringworm isaskin disease that can affect people and many kinds of animals. It is not caused byaworm at all, but rather by fungus that can grow in the skin. Ringworm onaperson's head usually shows asabald patch of scaly skin and elsewhere it can causeared, ring-shaped rash that may be itchy. Dogs and cats, especially kittens, can have ringworm and spread it to people by direct contact with the pet's fur. Spores of the ringworm fungus can survive foralong time on carpet, furniture and other surfaces and cause infections. People can also get ringworm from other people and their personal items like combs. Ringworm causesascaly, crusted rash that may appear as round, red patches on the skin.Other symptoms and signs of ringworm include patches of hair loss or scaling on the scalp, itching, and blister-like lesions. Ringworm is contagious and can be passed from person to person.
Salmonellosis isabacterial infection of the intestines caused byagroup of bacteria called Salmonella. The bacteria are shed in the stool of infected animals and humans. Infection can happen whenaperson eats food or drinks water or milk that has been contaminated with Salmonella bacteria. Infection with Salmonella can cause serious disease especially in children younger than5years of age and persons with weakened immune systems. Common signs and symptoms include Nausea,Vomiting,Abdominal cramps,Diarrhea,Fever,Chills,Headache and Blood in the stool.
An infection withatype of fungus, sporotrichosis can be spread to people from the skin of infected animals or by getting dirt into scratches and cuts. The fungus, called Sporothrix scheneckii, causes open sores in animals that can spread the disease to people. Dogs, horses and cats can become infected, but most human infections come from contact with cats, such as being scratched by an infected cat. The infection is treatable in both humans and animals. The first symptom of sporotrichosis isafirm bump (nodule) on the skin that can range in color from pink to nearly purple. The nodule is usually painless or only mildly tender. Over time, the nodule may develop an open sore (ulcer) that may drain clear fluid.
Toxoplasmosis isacommon disease found in birds and mammals across North America. The infection is caused byaprotoza parasite called Toxoplasma gondi and affects 10 to 20 out of every 100 people in North America by the time they are adults. The concern is greatest for pregnant women because the growing fetus can become infected with the toxoplasmosis parasite. This can happen if the mother is newly infected with the parasite while pregnant or just before she becomes pregnant. Infection in the unborn child early in pregnancy can result in miscarriage, poor growth, early delivery or stillbirth. Ifachild is born with toxoplasmosis he/she can experience eye problems, hydrocephalus (water on the brain), convulsions or mental disabilities.